Apple Music Vs Spotify i
Part 1.Apple Music na Spotify Music
Part 2.Catalogue nke Music
Part 4.Audio Ogo
Part 6.Radio Services
Part 7.Discovery nke Music
Part 8.Additional atụmatụ
Part 9.User Interface
1.Apple Music na Spotify Music
Spotify bụ a maara okwu maka niile music enthusiasts dị ka ọrụ na-enye ohere gụgharia nke ọkacha mmasị gị tracks. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ dị ka Taidal, Rhapsody, Rdio na ndị ọzọ nke na-enye yiri ụdị music gụgharia ọrụ ma na-adị mfe na-ekpe ikpe dominance nke Spotify na nke a nke. Ihe ugbu a yiri ka na-a dị iche iche na-aga na-abịa oge na Apple launching ya ọhụrụ music gụgharia ọrụ - Apple Music. Ntinye nke Apple na asọmpi ahịa nke music gụgharia ụlọ ọrụ ga-eme ka mpi ọbụna ihe ike ike.
Apple Music a mara ọkwa na 8th nke June, 2015 na WWDC na ugbu a na ọrụ e ulo oru na 30th nke June. The ọrụ ugbu a dị ka ike ibudata na PC, MAC usoro na iOS ngwaọrụ. Ọzọkwa Apple Music ga-akpaghị aka dị na iPad na iPhone na iOS 9.0 update nke a na ndokwa-abụ dị mesịrị akụkụ nke a ọnwa.
Ya mere, n'ihi egwu niile ndị hụrụ na-eme a nhọrọ n'etiti Apple Music na Spotify ga-maa-abụ a siri ike ọrụ. Ma ndị ọrụ ga-ahapụ dịghị nkume unturned na-adọta ndị nwere ọrụ na-ejigide ẹdude n'anya. N'okpuru ebe nyere bụ a tụnyere n'etiti Apple Music na Spotify na na n'ezie aga-eme ka gị ọrụ nke na-ahọpụta onye a obere mfe.
2.Catalogue nke Music:
Mgbe ọ na-abịa music gụgharia ọrụ, music katalọgụ-arụ dị nnọọ oké mkpa. Na-ekwu okwu n'ihi na Apple Music na Spotify na ugbu ugboro, ha abụọ yiri na-na otu n'elu ikpo okwu na collection nke gburugburu 30 nde songs ọ bụla. Ọ bụ ezie na iji na-adọta ndị ọrụ, Apple Music na-azọrọ na ọ ga-tinye ihe na-ekewaghị songs nakwa tracks si unsigned artists ha ndepụta.
Ma Apple Music na Spotify-enyere onye ọrụ ịgbakwunye streamed catalogs na ha onwe ha music. Iji ọrụ nke Spotify otu onye nwere ike na-agụnye music faịlụ dị na kọmputa na kwa tinye ha ẹdude playlist. Na Apple Music, nke i na-edi na gị iTunes akaụntụ na-akpaghị aka kwukwara. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado nke Taylor Swift mgbe ahụ n'ezie Apple Music ga-emeri obi unu dị ka ha jisiri ike na-ya na ọrụ ha.
Ahịa bụkwa isi ị na-ekpebi ihe na-akpata mgbe ahọpụta a music gụgharia ọrụ. Ọrụ nke Apple Music na oru na 30th nke June na dị ka a free update maka ọrụ nke iPad, Mac, iPhone, Windows PC na iPod Touch. Ozugbo ị imelite gị software, ọrụ ga-abụ dị iTunes na PC gị na na Music ngwa na iOS ngwaọrụ. Iji na-adọta ndị ọrụ Apple Music ga-enye ya ọrụ free nke na-eri ọnwa atọ na mgbe na £ 9,99 kwa ọnwa ga-ebubo.
N'ihi na ndị na-adịghị na-achọ na-etinye ibu arọ ha akpa, a free version nke Apple Music ọrụ na-dịnụ ma ọ ga na-abịa na Jikọọ mma nke ga-eme ka ị na-ele ma ọ bụ soro artists ma ọ bụghị na-egwu, chekwaa ma ọ bụ dị ka tracks. Family ngwugwu na-awa site Apple Music ebe 6 mmadụ pụrụ ịbụ akụkụ nke ngwugwu nke na-abịa maka a price nke £ 14,99 kwa ọnwa.
Mgbe ọ na-abịa ịnye ọnụahịa, Spotify scores mma ruru ya agbakwu atụmatụ na ụlọ ọrụ. N'ihi na ihe niile ndị na-ọrụ na-adịghị cheta megideghị na àgwà, Spotify awade otu nhọrọ nke na-akwado mgbasa gụgharia ebe ọrụ nwere ike enuba a track for free ma ọ ga-enwe ad ọdịnaya. Mgbe ọ na-abịa adịchaghị ma ọ bụ ụgwọ ọrụ nke Spotify, ọ bụ otu ihe ahụ dị Apple Music- £ 9,99 kwa ọnwa. Spotify nwekwara nhọrọ nke ezinụlọ akaụntụ ebe ngụkọta nke ise òtù nwere ike ịbụ akụkụ nke ngwugwu na-efu £ 29,99. A akwụkwọ ego nke £ 4,99 na-awa site Spotify n'ihi na ya adịchaghị ndenye aha nke maa-eme dị ka a ego mgbe n'ihi na ọrụ a.
Nke a bụ dokwara a oké gbalaga nke egwú. Ka ihe atụ, Jimmy-apụghị amia na guitar, John Bonham emepụta ihe kasị mma drum gafere, dị nnọọ banyere ma afew. Ị ga-ekweta na m na onye ọ bụla nke ha songs ndị dị nnọọ magburu onwe. Ha ga-abụ oké nkà legendries na dịkọrọ ndụ music.
Na ugbu ụbọchị dịruru ná njọ, Spotify nwere ike ga-atụle ga a mma nhọrọ na okwu nke ndakọrịta dị ka e nwere Spotify ngwa akwado Mac, iOS ngwaọrụ, Windows ekwentị nakwa dị ka Android. Apple Music ugbu adịghị enwe onye na-eji ngwa gam akporo na Windows ngwaọrụ. Ọzọkwa ngwa maka Apple TV a na-adịghị atụ anya nnọọ anya.
Ọ bụ ezie na redio ọrụ dị maka Spotify nakwa dị ka Apple Music ma ha abụọ nwere dị iche iche na-arụ ọrụ ụkpụrụ. E nwere ndụ na 24X7 global redio na-akpọ gbagwojuru 1 na Apple Music nke iyi si LA, London na New York. Iji mee ka redio ahụmahụ na-akpali ma na-atọ ụtọ, DJ si na-na-goro site Apple Music. The Apple Music Radio ụgbọ na-enyekwa nhọrọ ka ọrụ na-aga n'ihi na music dabeere dị iche iche Genres na otú ị pụrụ ọbụna ikwu ole na ole songs iji na-akụ na ụgbọ.
Ọ bụ ezie na e nweghị ndụ redio maka Spotify ọrụ ma ọ-enyere onye ọrụ ike ha na redio ụgbọ na ndabere nke mmasị songs, nka, Genres, albums na ndị ọzọ na ibiere na songs ga dakọtara ha. N'ihi ya redio ọrụ site Spotify na ina na-eme ka i na-enwe n'akwụsịghị akwụsị music gburugburu elekere. Ọzọkwa ị pụrụ ọbụna ime ka Spotify aghọta ihe ị na-ahọrọ site ruo ịtụ vootu ma ọ bụ ala ịtụ vootu na songs.
7.Discovery nke Music:
Spotify na Apple Music ma na-agba mbọ ịghọta mmasị nke ya ọrụ ma na-a dị iche iche obibia ime otu ihe ahụ. Nkwanye si gbagwojuru Music ẹka site Apple Music iji ghọta onye ọrụ mmasị na aro. Apple na-ekwu na tinyere algọridim ọ na-eme ka eji ụmụ mmadụ iji bulie music na ike a playlist. E nwere "N'ihi na unu" taabụ na Apple music na ihe jupụtara n'ime elu na gị na-atụ aro ka ị họrọ tracks nke gị nhọrọ.
The kwe nkwa si Spotify nọ na Discover ngalaba nke bụ ugbu a na-agagharị taabụ nke ngwa. Spotify tụlee ege ntị akụkọ ihe mere eme nke ọrụ iji tụlee kwe nkwa.
Ewezuga nke dị n'elu nyere, e nwere bụ ndepụta nke ọzọ atụmatụ ugbu a na ma Apple Music nakwa dị ka Spotify. Atụmatụ nke Spotify ndị ọzọ anya ụtọ music n'ọnọdụ dịgasị iche iche mgbe maka Apple Music ọ bụ ndị ọzọ yiri ka a na-ejikọrọ na ọkacha mmasị gị na-ese.
Atụmatụ nke Spotify na-e otú ahụ na nke mere na ọ na-enyere gị na-enwe ọkacha mmasị gị tracks si nkasi obi nke ebe obibi gị nakwa dị ka obi. E nwere ọhụrụ atụmatụ akpọrọ na agba na okụt si na tempo na nke ị na-agba na otú egwu music nke ọkụ na-agba. Otu song mgbe ndị ọzọ na-eme fading n'ime onye ọ bụla ọzọ mere na ị pụrụ ịnọgide na-enwe gị tempo na-akwali. The wuru na-ngwaọrụ nke Spotify-emekwa ka onye ọrụ na-enwe ha mmasị tracks site mpụga okwu. Spotify na-enye ohere mwekota na Facebook na ndị ọzọ na-akparịta ụka n'Ịntanet mere na ị maara ihe gị mma buddies na-ege ntị na ọbụna na-eso ha. Ị nwere ike ọbụna ịkọrọ họrọ songs na ndị ị hụrụ n'anya site Gburu, WhatsApp, ozi ederede na dị iche iche mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet nyiwe.
Na Apple Music, Jikọọ ngalaba e wezụga enye music ijikwa ọrụ nwekwara eme ka a na-elekọta mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet n'elu ikpo okwu ebe artists nwere ike ịkọrọ ha lyrics, ihe oyiyi, videos na ndị ọzọ na ọdịnaya na ha Fans. Dị ka onye ọrụ ị pụrụ ọbụna na-amasị na-ekwu okwu na ndị a ọdịnaya. Apple na-azọrọ na na na-abịa ugboro, ya ọrụ ga-eme ihe dị ka a n'elu ikpo okwu maka ọhụrụ artists ịme nakwa dị ka akwalite ha music. Apple Music na-enye ohere ịdị na songs ma ọ bụ a playlist naanị site AirDrop, ederede, Facebook, twitter na email. E nweghị nhọrọ ke Apple Music ka mmadụ jikọọ na gị mma buddies
Mgbe ọ na-abịa ka onye ọrụ interface, ma Apple Music nakwa dị ka Spotify nwere a dị mfe na-achọ imewe. Ma mgbe ị ga-arụ ọrụ na ma ndị ọrụ, ị ga-ahụ n'ezie dị iche na ha were ebe Apple bụ bit mgbagwoju anya na atụmatụ mgbe Spotify enye ezigbo ịrụ ọrụ. Ma ndị ọrụ na-abịa na 3 buttons nke na-anọchi anya omenkà, album na egwu ma ọ bụ a aha malite na aka nri. Onye ọ bụla n'ime ndị a atọ buttons nwere a menu na nhọrọ dịgasị iche iche.
E nweghị obi abụọ banyere eziokwu na Apple Music na Spotify ndị yiri nnọọ na akụkụ dị iche iche, ma, ọ bụkwa eziokwu na ma na-enye ọtụtụ dị iche iche set nke ọrụ nakwa dị ka ahụmahụ. Ọ ga-abụ kwa n'oge na-ekpe ikpe ma ọ bụ jiri ya tụnyere ma ndị ọrụ dị ka Spotify emenịm ya ụkwụ na ubi mgbe Apple Music bụ nnọọ a ọhụrụ so. N'ihi na egwu niile ndị hụrụ ndị na-ama na-eji Spotify ọrụ nwere ike inye a ohere Apple site ụtọ ha free ọrụ maka ọnwa atọ. Ọ bụrụ na ha na-ahụ ya mma ka tụnyere Spotify, ha nwere ike na-ahọrọ ha na ndenye aha ọzọ ọnụ ụzọ nke Spotify bụ mgbe niile oghe.
> Resource> Music> Apple Music Vs Spotify Music